WOWOW 3 Umngxuma 4 intshi yaseziko IFaucet yeBathroom yeChrome eneLift Rod Drain Stopper - IiFaucets zaseKitchen eziGqwesileyo 2021 | IiFaucethi zeBathroom ezigqibeleleyo | WOWOW iiFaucets
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Iziko lokuqubha leepompo zangasese / WOWOW 3 Hole 4 intshi Centerset Igumbi lokuhlambela ibhafu Chrome nge-Lift Rod Drain Stopper
WOWOW 3 Hole 4 intshi Centerset Igumbi lokuhlambela ityesi yeChrome ngeLift Rod Drain Stopper
Amazon US I-Amazon MX
Yiza nendibano yokuphakamisa amanzi, tyhala unyuse intonga yokunyusa ukuze usebenzise amanzi, ekubonelela ngokulula, ngokukhululekileyo nangococeko lwamava okusetyenziswa. Inkqubo yokugqitywa kweChrome yokuSebenza okuSimahla kwe360 °, ukugqitywa kuyakuxhathisa ukubola kunye nokudakumba ngokusetyenziswa kwemihla ngemihla.
UKUPHATHWA KABINI KWIBHOKISI YANGAPHAMBILI YOKUGQIBELAI-4 intshi ye-bomba lokuhlambela elinoyilo lwesiphatho, esenza ukuba kube lula ukulungisa amanzi kunye neqondo lobushushu! Ispout esiphakamileyo sikunika ubungakanani obaneleyo phantsi kwespout.
IKHRISHI ECOLISIWEYO GQIBA: Amampunge amampu kwisipili esinjengesichomi sokugqiba, uyilo olukhethekileyo lwespout lokudala intengiso olungazange luphelelwe lixesha. Non-umhlwa, non-umhlwa, anti-ekuqaleni.
UKUBHALWA KUNYE: Umbhobho wokuhlambela weziko lokuhlambela uza ne-lift rod drain assembly kunye neiglavu. I-4-intshi yeziko kunye ne-3 hole hole yoyilo ivumela ukufakwa ngokulula.
UMGANGATHO OPHAKAMILEYO NGExabisoUmlenze wobhedu uqinisekisa ukuqina nokuxhomekeka; Yenziwe ngezixhobo zeBASF zokutya, zikhusele wena kunye nosapho lwakho. Umphunga wombhobho wokuhambisa amanzi owenziwe nge-aerator yeABS unokukunceda ugcine amanzi. (Esi sihambisi-moya singathatyathwa kanye ngezandla zakho ukuze sicoceke)
INKONZO EYENZELWEIminyaka emi-5 iwaranti enomda kunye nenkxaso kubathengi inikezelwa. Igqunywe kukubuya kweentsuku ezingama-90. Ukuba unemibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
I-SKU: 2321100C iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Iziko lokuqubha leepompo zangasese tag: 4 intshi
12.2 x 8.66 x 3.11 intshi
Wowow Centreset Bathroom faucet ene pop-Up Dra ...